အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားသည်သူ likes သူမိန်းမ, လျစ်လျူရှု?
အများအပြားယုံကြည်သော်လည်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အမူအကျင့်ရှင်းပြချက် defies, ဒါပေမယ့်လည်းပိုမိုအားကောင်းလိင်အချို့လုပ်ရပ်များအံ့သြစရာရှိပါတယ်။ ကြောင်း လူအတော်များများဟာလူကိုသူ likes ထိုမိန်းမသည်လျစ်လျူရှုဘာဖြစ်လို့တွေးမိ။ သငျသညျအကြောင်းရင်းရှာမီ, သင်သည်မည်သည့်လည်းမရှိရှိမရှိထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါတယ် ကိုယ်ချင်းစာ သူ့ထံမှ။ များစွာသောမိန်းမသည်လက်ရှိတွင် Non-တည်ရှိခံစားချက်များကိုတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ပါစေနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Self-ပရိယာယ်များသောအားဖြင့်စိတ်ပျက်မိကြောင်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားမကြာခဏသူ့ရဲ့စစျမှနျတဲ့အတှေးအများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုပေးတော်မူ၏အဖြစ်ကိုယ်ချင်းစာ၏ရှေ့မှောက်တွင့်ယောက်ျားသည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ။ မသိမသာကြည့်တစ်ချက်, ခဏထိတွေ့, ဟောပြောပွဲ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုခံစားချက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီနေသော်လည်း, sterner လိင်အဖွဲ့ဝင်အချို့ရှေ့ဆက်မဆိုခြေလှမ်းများစေပါဘူး။
တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်း။ သူတို့က "လေး" ၏အယူအဆအများအပြားတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်, သူ့ထင်မြင်ချက်အတွက်အကျိုးဆက်များအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်း။ ယုံကြည်ကြသောကြောင့်များစွာသောလူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရထိုသို့သောသံသယနှင့်အတူ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤလူတို့သညျသငျသညျပထမဦးဆုံးအဖွင့်ကြီးထွားနှင့်သာထို့နောက်အဆောက်အအုံဆက်ဆံရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့၎င်း၏ခြေထောက်ပေါ်ရနျလိုအပျကယုံကြည်ကြသည်။ ဖောက်ပြန်တရားစီရင်ရာကသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပါ - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်ပျက်ကွက်အတွက်အဆုံးသတ်သောကြေးဇူးမတငျသောအလုပ်တခုကို။
မိမိအထိုက်တန် "ဖြည့်ပါ" ဟုအဆိုပါအလိုဆန္ဒ။ လူယောက်ျားသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုလျစ်လျူရှုဖို့အစပြုဘာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဘုံအကြောင်းရင်း။ ဒါဟာနှစ်ခြိုက်၏အရာဝတ္ထုကိုဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၌သူ၏တန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်လိမ္မာကိုသိသောယောက်ျား, အသုံးပြုသည်။ များစွာသောမိန်းမတို့အထီးလျစ်လျူအားဖြင့်မိမိအပိုက်ကွန်သို့ကျသွားပိုပြီးအဆုံးအဖြတ်ခြေလှမ်းများဘို့တွန်းအားပေးနေသည်။
အဆိုပါပဏာမယူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပေးရန်အလိုဆန္ဒ။ ယောက်ျားအဓိကခဲ့ကြသည်အခါကြိမ်, မိန်းမများရုံ, မြင်းဖြူပေါ်တွင်မင်းသားအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလွန်နှင့်ယနေ့များစွာသောမိန်းမတို့ဦးဆောင်အနေအထားကိုင်ထား, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်သို့ကိစ္စရပ်များယူပြီးနေကြသည်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပဏာမခြေလှမ်းအပေါ်သွားထိုသို့သောအလိုဆန္ဒအပြုအမူ၏ထိုကဲ့သို့သောပုံစံမိဘများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အပြစ်တင်သူ့ကို passive အောင်လူဖိနှိပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်မှု, ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျိုးနှလုံး။ သူ likes အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျစ်လျူရှုတခါတရံမှာလူယခင်ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲရှိပါတယ်ကတည်းက။ ခိုင်မာထင်းမီးထဲကအတော်များများကိုယ်စားလှယ်များစောင့်ရှောက် စိတ်ခံစားမှု ပြင်ပမှ image ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, နှလုံးမှာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကဒရာမာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှေးခယျြသောအချိန်ပေးရမည်။ ဒါဟာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်အတိုခရီးစဉ်အတွက်လမ်းလျှောက်ဖိတ်ခေါ်ဥပမာ, သူ့ကိုအာရုံမှအကြံပြုသည်။ ဤအခြေအနေ၌, "အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတစ်" ၏နည်းဗျူဟာကောင်းပြီပြုသောအမှု။
သူကအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မထိုက်မတန်ကြောင်းထင်မြင်ချက်။ စိတ်ပညာ, လူမအောင်မြင်မှုများကြုံတွေ့ခဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဘဏ်စာရင်းများအားဖြင့်ကြောက်ယောက်ျားလျစ်လျူရှုရတဲ့အကြောင်းရင်း။ ဒီအနိမ့် Self-လေးစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး, ဤလူများအတွက်ကိုယ်ချင်းစာစျရှိလြှငျသငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လက်သို့ကိစ္စရပ်များ ယူ. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူရှိသည်။
ခံစားခကျြသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်. မသေချာမရေရာ။ အများကြီးသံသယကြုံနေရစဉ်လေးပေမယ့်လည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသဘောထားများနှင့်ခံစားချက်များကိုခဲ့ကြသည်။ လူတလျစ်လျူရှုထားလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသူသည်သင်တို့အသီးအသီးအခြားအမကိုက်ညီပါဘူးထင်၏။ ခိုင်မာလိင်၏အတော်များများကကိုယ်စားလှယ်များမကြာခဏသူတို့အမှန်တကယ်ထိုမိနျးမအဘို့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုနှင့်အခြားဘာမျှမယ့်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ သံသယတခါတရံအချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျတဲ့သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှစပ်လျဉ်းပေါ်ထွန်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုမိနျးမယ့်သူကထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်လို့မရဘူးသဘောပေါက်လူအားလုံး၎င်း၏ဘုန်းအသရေမှာသူ့ဟာသူပြသသင့်ပါတယ်။
လူတို့သညျကိုခစျြ၏သက်သေလက္ခဏာများ - စိတ်ပညာ
Black ကဗုံးကြဲလေယာဉ် - အနက်ရောင်ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူဖန်စီလေး - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်,
"50 အရိပ်မဲမှောင်တွင်" ရုပ်ရှင်၏ပစ်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. 18 အရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်ကို
အခမဲ့ခရီးသွားလာ 10 နည်းလမ်းများ
အမေရိကရှိခေါင်းဆောင် bodipozitiva လှုပ်ရှားမှု - ကိုယ်အလေးချိန်!
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Willow နှငျ့အဘယျသို့ပွုသလော
သားအိမ် hyperstimulation - လက္ခဏာများ
Provence ရဲ့ style အတွက်ကုလားကာ
မွှော့ - contraindications
က Natalia Vodianova Antoine အာနို့ထ်စိန့်ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အပေါ်ချီးကျူးထိ
တစ်လအဘို့လူကိုဖွစျလာသူချာ၏သမီး, 20 ကီလိုဂရမ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်
လသာဆောင်ပေါ် WASP - ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကဲ့သို့?